‘म निर्माता निर्देशक भन्दा पनि कलाकार नै हु : नायिका सिर्जना वस्नेत – Gulmiews
‘म निर्माता निर्देशक भन्दा पनि कलाकार नै हु : नायिका सिर्जना वस्नेत
July 3, 2016 Raju Gautam
No comments	सुर्य चन्द/जनार्जन पौडेल
काठमाडौँ: केही बर्ष अघि नेपाली चलचित्र नगरीमा चर्चामा रहेकी पात्र हुन सिर्जना वस्नेत जसले चलचित्र देउता, ज्वला, भूल, टुहुरो, यस्तै रहेछ जीन्दगी, अग्नीपथ ,धर्मात्मा ,करण अर्जुन,लगायतका दर्जनौ चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । दर्जनौ नेपली सिनेमामा अभिनय गरे पनि उनलाई सबै दर्शकमाझ चिनाउने सिनेमा भने हालसम्म देउता नै रह्यो । उनी राजेश हमालद्धारा अभिनित चलचित्र देउताबाट डेव्यू गरेकी नायिका हुन् । जुन फिल्मलाई तुलसी घिमीरेले निर्देशन गरेका थिए भने यूवराज लामा निर्माताको रुपमा रहेका थिए । देउता पछि थुप्रै चलचित्रमा उनले अभिनय गरि सकेता पनि देउताको जस्तो क्रेज बटुल्न सकेकी छैनन उनले । केही समय आफ्ना श्रीमानले निर्माण गरेका चलचित्रमा अभिनय गरेकी नायिका बस्नेतले यतिखेर भने श्रीमानको मृत्यु पश्चात एक्लैले चलचित्र निर्माण गरेकी छिन उनको चलचित्रको नाम रहेको छ ‘गुडलक’ जुन चलचित्र यहि साउन १४ मा रिलिज हुने तयारीमा छ । उनै नेपाली चलचित्रकी सदावहार नायिका सिर्जना वस्नेतसँग नेपाली चलचित्र, उनका जीवनका आरोह अवरोह र आगामी सिनेमा ‘गुडलक’ सँग सम्वन्धित रहेर गरेको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत छ :
– नेपाली सिनेमा क्षेत्रबाट लामो समय हराउनुभयो नि ?
म खासै हराएको त छैन । लामो ग्याप भनेको त्यहि एक दुई बर्ष मात्र हो । बिच बिचमा बिभिन्न पारिवारिक झन्झटहरु आइलागे,मेरो आमा पनि बिरामी हुनुभयो त्यसले पनि केही ग्याप हुन गएको हो । जतिखेर कलाकारको रुपमा मात्र दर्शकसामु आइएको थियो निरन्तरता थियो । तर पछिल्लो समयमा आफै चलचित्र निर्माण निर्देशन गर्न थालेपछि अलि बढी नै व्यस्त भइएछ । यस बिषयमा म मेरा दर्शक स्रोताहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने म कतै हराएको छैन, म जहाँ भए पनि आम नेपाली दर्शकको मन मुटुबाट हटेकी छैन ।
– पहिलो चोटि सिनेमा निर्माण/निर्देशन गर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
जस्तो एउटा कलाकारको रुपमा मात्र काम गर्दा र निर्माता निर्देशकको समेत भूमिकामा रहदा धेरै फरक पर्ने रहेछ । जुन मैले महशुस गरेकी छु । धेरै नै गाह्रो अनुभव छ भन्दा पनि फरक नपर्ला यतिखेर भने जसरी तसरी तयार गरेको सिनेमा ‘गुडलक’रिलिज गर्ने तिर लागि परेकी छु ।
– तपाइँलाइ कतैबाट सिनेमा खेल्ने अफर नआएर आफै सिनेमा बनाउन तिर लाग्नु भएको हो कि के हो ?
त्यस्तो होइन, मलाई आफै सिनेमा बनाउने मुड चल्यो त्यसैले हो । मलाई अरुको सिनेमामा अफर नआएको हैन थुप्रै अफर आएको थियो तर आफ्नै निर्माणमा लागेकाले खेल्न नभ्याएर नखेलेको हो । मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने यदि कसैले आफूलाई काम दिन्छ भने त्यसमा फुल्ली टाइम दिनुपर्छ डेडिकेटेड भएर लाग्नुपर्छ ।
– बिचमा तपाइँको घर व्यवहारमा केही दुखद घटनाहरु घटे भन्ने कुरा मिडियामा आएको थियो नि ?
मेरो सबै व्यक्तिगत कुरा म यहाँ बताउन चाहन्न । सबैका जीवनमा थुप्रै व्यक्तिगत घटना घट्ने गर्छन मेरो जीवनमा पनि घटे होलान त्यो कुनै नौलो कुरा होइन् । पछिल्लो समयमा चाहि मैले सिने क्षेत्रमा समय दिन नसक्नुको कारण मेरो ममी हो । मेरो ममी विरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ । आफूलाई जन्मदिने आमा भन्दा ठूलो यो सन्सारमा अरु के नै हुन्छ र ?
– नेपाली चलचित्रका नायिकाहरु चर्चामा आइसकेपछि धनी केटासँग विहे गरेर फिल्म नगरी बाटै हराउछन भन्ने आरोप छ नि, यसमा के कति सत्यता छ ?
यस बिषयमा अरुको बारेमा म केही बोल्न चाहन्न । मेरो बारेमा भन्नु पर्दा मैले सम्पतिको लोभमा बिहे गरेको होइन् । मेरो त भाग्य नै त्यस्तै थियो । अहिलेसम्म पनि म मेरो छोराको नागरिकताको लागि लड्दैछु । मैले यदि धनसँग मात्र मान्यता राखेर बिहे गरेको भए आज मसँग गाडी, बंगला, बैक व्यालेन्स थुप्रै हुने थियो । तपाइँहरुले नै देख्नु भएको छ न मेरो घर छ , न बैक व्यालेन्स छ न गाडी चढेर नै हिड्छु । तर पनि जीवनमा म धेरै नै खुशी छु । किनकि मैले उसलाई माया गरेको थिएँ उसले पनि मलाई माया गरेको थियो । आज उसको नासोको रुपमा उसको छोरा मसँग छ ।
धन सम्पतिकै कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनमा उसले घर बनाउछु भन्दा मैले सिनेमा बनाउ भनें । ‘गोठालो’, ‘चुनौती’ लगायतका सिनेमा बनाएको बखत यदि घर बनाएको भए शायद केही प्रोपर्टी त पक्कै हुन्थ्यो । उनी बितेपछि पनि यदि मलाई सम्पतिको त्यति नै मतलव थियो भने म त्यतिखेरै उनका परिवारका विरुद्ध मुद्धा पनि हाल्न सक्थे । तर सुरुमा वहाँका पिता माता अर्थात मेरा सासु ससुराले हामी तिमी र नातीको लागि केही गर्छौ भने केही समय पछि आएर मेरो बुहारी नै हैन भन्न थाले । त्यसपछि मात्र मैले बाध्य भएर मुद्धा दिएकी थिए छोरा को नागरिकता र उसको भविष्यको लागि अनि म अहिले माइतीमा बसेकी छु मात्र मेरो छोराको भबिष्य निर्माण गर्दै ।
– अझै राजेश हमालको नायिका बनेर सिनेमा खेल्न मन लागेको छ होला नि ?
अफकोर्श लाग्छ , नलाग्ने त कुरै भएन नि वहाँ भन्दा म पछिनै यो क्षेत्रमा आएकी हुँ । वहाँसँगै खेलेको सिनेमाले मलाई यो क्षेत्रमा स्थापित बनायो । फेरि म बुढी भइसकेकी छु जस्तो त लाग्दैन मलाई हाँस्दै भनिन्…… सिनेमाको हिरोइन हुनका लागि सोह्र बर्षको हुनै पर्छ भन्ने पनि त केही छैन नि हैन र ?
– तपाइँले निर्माता /निर्देशक एवं नायिकाको भूमिकामा रहेर तयार गरको चलचित्र ‘गुडलक’को बारेमा केही बताइदिनुस न् ?
म अरुले जस्तो मेरो चलचित्रमा यस्तो छ उस्तो छ भनेर धेरै बयान गर्न चाहन्न । यो मैले तयार गरेको एकदमै छोटो मिठो चलचित्र हो । दर्शकहरुलाई इमान्दारीताका साथ के भन्न चाहन्छु भने दुई घन्टाको समय एकदमै सजिलै बित्छ ,छिट्टै बित्छ । हेर्दा हेर्दै लौ मुभी त सकिएछ भन्ने जस्तो हुन्छ ।
– ‘गुडलक’मा तपाइँ लगायत अन्य को को कलाकार हुनुहुन्छ ?
यसमा नायकको रुपमा नव नायक नवराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नायिकाको रुपमा म आफै भएँ । अन्य कलाकारमा रश्मी भट्ट र जोसना फुयाल,रबिन्द्र खड्का,अमित श्रेष्ठ आदि रहेका छन् ।
– कुनै बेला तपाइले चर्चित नायक राजेश हमालसँग डेब्यू गर्नु भएको थियो,कसरी सञ्जोग मिलेको थियो राजेश हमालसँग खेल्ने ?
म एसएलसी दिएर बसिरहेको थिएँ मेरो फुपुको छोरा तुलसी घिमीरे र युवराज लामासँगै काम गर्नुहुन्थ्यो । देउता सिनेमा गर्नुअघि वहाँहरुले नयाँ अनुहार लिने भनेर सल्लाह गर्नु भएको रहेछ । मलाइ पनि अभिनय गर्ने सानैदेखिको सोख थियो । त्यति नै बेला मेरो दाईले तुलसी घिमीरे दाइलाई मेरी बहिनी पनि अभिनयमा रुचि राख्छिन एकपटक हेर्ने त भन्नुभएछ । तुल्सी दाईले चाहि उसलाइ अहिले केही पनि नभन्नु भोली उसलाई सेलेक्ट गरिएन भने नराम्रो लाग्न सक्छ । खाना खाने बहाना गरेर लेराउ भन्नु भएछ । मलाई दाइले तुल्सी दाइकहाँ लगेपछि तुल्सी दाइले मैंले अभिनय गर्न सक्छ भन्ने लागेछ र वहाँले नै सिधै अफर गर्नु भयो ।
– पहिलो सिनेमा खेल्दा अप्ठेरो त भएन नि ?
तुल्सी दाइले धेरै सिकाएर काम लगाउनु भयो त्यस्तो अप्ठेरो भएन् । पहिलो सिनेमा नै मेरा लागि माइलस्टोन बन्न पुग्यो । पहिलो सिनेमा नै एकाएक सुपर डुपर हिट भयो । आजसम्म मैले कयौ मुभि गरेता पनि सिर्जना वस्नेत भन्ने बितिक्कै देउताको नायिकाको रुपमा चिन्ने गर्छन् ।
– उमेर ढल्किदै जाँदा पनि फिगर चाहिँ कसरी मेन्टन गरिरहनु भएको छ ?
खानपानमा पथ परेज र डाइटिङ नै हो मूख्यत । जिमहरु गरेर मर्निङ वाक आदि गरेर तौललाई सन्तुलन गरिरहेकी छु ।
– पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्रमा थुप्रै बेडसिन एवं लिप किस सिनहरु देखिएका छन,के नेपाली चलचित्र चल्नका लागि त्यस्ता सिनहरु अनिवार्य भएका हुन त ?
मैले अहिलेसम्म त्यस्तो खालको चलचित्र गरेको छैन । मैलेत मान्छेले टच पनि नगरी अवार्ड जितिराखेको हुन्छ । यो सब त बहाना मात्र हो । यहाँ कथावस्तुले मागेको भनेर बहाना बनाउनेहरु पनि छन । तर, कथा पनि त हामिले नै लेख्ने हैन र ? मूभि चलाउने ट्रिक मात्र हो । जस्तो कि चलचित्रमा कुनै पात्रको रेप भयो भन्ने कुरालाई देखाउन एउटा रुख घुमाएर पनि सकिन्छ् । हिजोआज जुन अश्लिल सिनेमाको बाढी आइरहेको छ यो ट्रेन लामो समय सम्म चल्दैन् । अश्लिल सिनले भरिएको मूभि केही दिन चल्ला तर लामो समय चल्न र सदावहार सिनेमा बन्न सक्दैन् ।
– अन्तमा आफ्ना दर्शक स्रोतालाइ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाइ अहिले सम्म सिर्जना बस्नेत भनेर चिन्ने र मेरो अभिनय मन पराउने दर्शक स्रोताहरुलाई मलाई अहिलेसम्म मन पराइदिनुभएकोमा धन्यवाद दिदै मैले धेरै दुख गरेर निर्माण गरेको सिनेमा ‘गुडलक’लाई पनि एक पटक हेरेर कमेन्ट गरिदिनुस भन्न चाहन्छु ।
Related Posts	गायिका शुसिलालाई मायाँले भुकम्प चलाउदा ज्यानै थर्कियो (भिडियो सहित)...	October 17, 2016	लोकगायक चन्दद्वारा प्रतिष्ठान केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी...	September 23, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	महेश बस्नेत गुल्मी आउँदै